LG Tone Free HBS-FN7: Mkpesa mkpọtụ na-arụsi ọrụ ike na ọtụtụ ndị ọzọ | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Hernandez | 28/04/2021 10:00 | General, Nyocha
Anyị na-alaghachi na ibu na nyocha nke ngwaahịa dị mma, oge a site na ụlọ ọrụ South Korea LG nke butere ekweisi “nke kachasị elu” dị nso n’ahịa n’oge na-adịbeghị anya, ndị nke anyị nwalere ogologo oge na anyị ga-agwa gị ogologo oge.
Ghọta na anyị LG Tone Free HBS-FN7, ekweisi nwere okwu disinfectant, nkagbu mkpọtụ yana arụmọrụ ịtụnanya. Anyị ga-agwa gị ihe ahụmịhe zuru ụwa ọnụ anyị nwere na ekweisi ndị a nyerela ọtụtụ ihe ị ga-ekwu n'oge na-adịbeghị anya na ihe nsonaazụ ahụ gafere mgbe ị gabigara na tebụl nyocha anyị.
Oge a anyị na-ekwu maka ekweisi nke dị n'elu pyramid nke ekweisi TWS nwere nkagbu mkpọtụ, ma maka ọrụ yana ọnụahịa. Ha dị nnọọ ka ngwaọrụ gara aga sitere na LG n'onwe ya nke na-agafebeghị na tebụl nyocha anyị, ngwụcha na FN6 na nke nwere ọnụahịa dị oke karịa nke mbipụta a ebe ọ bụ na ha dị na euro 99, yana enweghị nke enweghị nọ n'ọrụ mkpọtụ nkagbu. Anyị na-ekwu okwu ugbu a banyere LG Tone Free HBS-FN7 (nke na-esote LG FN7).
3 Nnwere onwe na ụda dị mma
4 Nkume mkpọtụ na-arụsi ọrụ ike na echiche onye editọ
Hasdị ahụ ahọrọla maka imewe na imepụta ihe "kachasị". Ọ bụ mmetụta anyị nwere ngwa ngwa na kọntaktị mbụ anyị na nkwakọ ngwaahịa na ngwaahịa n'ozuzu ya. Anyi nwere ihe owuwu plastic zuru oke maka akuku anyi nwalere na sistemu nti n’ime okwu nke igwe okwu ekweisi, ihe di nkpa mgbe anyi na ekwu maka ihe ndi nwere ANC (Akuko Noise na achoputa ya n’olu bekee). Okwu ikpe na-agba okirikiri n'otu agba ahụ a kpọtụrụ aha n'elu. Agbanyeghị, anyị nwere ike ịzụta ha na ọcha ma ọ bụrụ na anyị chọrọ, agba abụọ a bụ palette dịnụ.
Akụkụ nke igbe: X x 54,5 54,5 27,6 mm
Akụkụ nke ekweisi: X x 16,2 32,7 26,8 mm
Okwu ikpe na-acha ọkụ nwere ọkụ nke na-achọpụta ọrụ nke ekweisi na enweghị aha ika na mpụga, ihe na-achọ ịmata ihe. Ejiri plastik matte mee ya, n'adịghị ka ekweisi n'onwe ya, ọ na-eguzogide mkpịsị aka ya nke ọma. Ọ dị kọmpat ma dabara adaba na akpa gị, yana USB-C na azụ mkpuchi na bọtịnụ mmekọrịta na aka ekpe.
N'ụzọ dị otú a, anyị nwere nkọwa dị ịtụnanya na ekweisi na-enye ìhè UV na ekweisi iji kpochapụ nje bacteria, sistemụ ahụ LGnano nke LGnano na-ekwe nkwa ibelata nje site na 99,9% were naanị nkeji iri ekpughere sistemu gị. Agbanyeghị, anyị ekwenyela na ọkụ ọkụ UV anaghị ewere ọnọdụ maka nkeji 10 mana ọ na-ewere ọnọdụ maka sekọnd ole na ole.
Anyị na-eche ihu na ekweisi nwere hypoallergenic silicone pad na mgbochi mmiri na asambodo IPX4, yabụ anyị nwere ike iji ha kwa ụbọchị dabere na ọzụzụ ma ọ bụ mmiri ozuzo.
Na ọkwa njikọ anyị nwere Bluetooth 5.0, yana ohere nke ijikọ ma gam akporo na iOS ekele maka ngwa LG Tone Free nke enwere ike ibudata site na inyocha QR code gụnyere na igbe. Na ngalaba ọrụ LG na-enye ntakịrị data teknụzụ, yabụ na anyị ga-elekwasị anya na nke kachasị na ha na-ahapụ anyị ka anyị jiri aka ha mee ihe site na ule anyị. Ha nwere igwe okwu abuo abuo yana otutu uzo ozo no noo (ANC) na anyị nwere ike ịhazigharị site na mmekọrịta ya na ekweisi site na igwe mmetụ ya ebe anyị nwere ike ịkpọ egwu ma ọ bụ zaa oku.
Nnwere onwe na ụda dị mma
Akụkụ dị ịrịba ama bụ ohere nke ịrụ ọrụ na mgbakwunye na kpochapụwo USB-C na-akwụ ụgwọ, Qi ọkọlọtọ ikuku na-akwụ ụgwọ naanị site na ịtụkwasị ya na ntọala nke ọdịnala. Banyere batrị anyị nwere 55 mAh maka ntị ntị ọ bụla na ikpe 390 mAh. Firmlọ ọrụ ahụ kwere anyị nkwa awa 7 maka ekweisi na 14 karịa ma ọ bụrụ na anyị etinye igbe nkwụ ụgwọ. N'ime ule anyi, anyi enwetala ihe dika 5h 30m nke ndi mmadu nwere onwe ha. N'ezie, ọ dị mma ịkọtara ya maka USB-C anyị nwere ike ịnweta ụgwọ nke otu awa iji ya na ihe dị ka nkeji ise.
N'ihe banyere ụda, LG na-ahọrọ ọzọ maka Meridian Audio's Digital Signal Processing, Otú ọ dị, ihe anọ ụdịdị nke ojiji na gị ngwa na-enye ohere ka anyị ịgbanwe-eme maka a pụtara elu-edu ụda. Anyị nwere bass mara akara nke ọma mana nke ahụ anaghị ekpuchi olu. Anyị enweghị koodu Qualcomm aptX, mana anyị ahụbeghị nnukwu ọdịiche na ekweisi na-eme. Ahụmịhe anyị nwere afọ ojuju ma kwekọọ na ọnụahịa anyị kwụrụ maka ngwaahịa ahụ, n'agbanyeghị na ikekwe ọ bụghị ndị na-asọ mpi dịka AirPods Pro (nke dị oke ọnụ).
Nkume mkpọtụ na-arụsi ọrụ ike na echiche onye editọ
Firmlọ ọrụ ahụ kwere anyị nkwa na anyị nwere igwe okwu atọ iji kwụsị mkpọtụ ọ bụ ezie na ha na-ezo aka na abụọ n'ime ha maka mkparịta ụka. Na nke a, ekweisi na-aza nke ọma na arụmọrụ achọrọ iji kpọọ oku ekwentị. NASupportedda nke diaphragm ya nwere okpukpu abụọ na-akwado na-eme ka ahụmịhe ahụ dị mma nke ukwuu na-atụle na anyị na-ekwu maka ekweisi ntị TWS na ntị. Yabụ n'ozuzu ọ dị ka anyị na-ahụ ngwaahịa zuru oke.
Nwere ike inweta LG Tone Free FN7 site na 178 na ebe nrụọrụ weebụ gị ma obu na oke asọmpi asọmpi site na euro 120 na Amazon.
Igweisi ekweisi a na-apụta ìhè nke ukwuu karịa na oji, yana njiri mara mma ma dịkwa mma karị, nke ga-abụ agba nke anyị kwadoro. Anyị nwere olile anya na ị masịrị nyocha anyị banyere LG Tone Free FN7 sitere na ụlọ ọrụ South Korea na n'ezie anyị na-echetara gị na ị nwere ike ịhapụ anyị ajụjụ ọ bụla gbasara ya na igbe igbe. N'otu ụzọ ahụ, anyị na-echetara gị na ị nwere ike ịdenye aha na chanel YouTube anyị ebe anyị na-ahapụ ọtụtụ ọdịnaya na-atọ ụtọ nke na ị gaghị achọ ịhapụ.
Uda Free FN7
Ihe na: 28 April 2021
Mgbanwe ikpeazụ: 27 April 2021
Dị nnọọ adịchaghị ihe na imewe
ANC na nnwere onwe dị mma
Usoro usoro ihe omuma di nfe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » LG Tone Free HBS-FN7: Nkagbu Noise na-arụ ọrụ na Ọtụtụ More